बास बसेको गुफाभित्र बाघ पो रैछ !
Saturday 21st,Oct 2017 03:55 PM
पार्वती केसी - मेरो नाम पार्वती केसी हो । म अहिले ८१ वर्षको भएँ । म रुकुम जिल्लाको बाँफीकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ नेपानेमा स्छु । मेरो १४ जनाको सँयुक्त परिवार छ । तर म अहिले एक्लै बस्छु । एक्लै बसेपनि मलाई खानेकुरा मेरा दुई भाइ छोराहरुले ल्याइदिन्छन् । मलाई सरकारले महिनामा पाँच सय रुपैयाँ भत्ता दिन्छ । त्यसैबाट अरु खर्च जुटाउँछु । म बिरामी हुँदा छोरा–बुहारी र नातिहरुले हेर्छन् । मेरो श्रीमानको निधन भएको १६ बर्ष बितिसक्यो ।
पहिले र अहिले निकै परिवर्तन भएको छ । अहिले कति सुखका दिन आए । मेरो बुढा बाँचेको भए कति सजिला दिनहरु देख्दा हुन् । हामी सानो छँदा चप्पल बिना नेपालगन्जबाट हिँडेर नुन ल्याउनुपर्थ्यो त्यो पनि बोकेर । एकपटक धेरै दुःख भएको थियो । हामीले ल्याएको सामान र नुन सल्यानको जङ्लमा चोरले चोरेको थियो । त्यत्तिबेला हामी धेरै रोयौं । रुँदैरुँदै घर आएका थियौं । कति हो कति दुःख लागेको थियो । हिजो आज त हामीले भोगेका कुरा सुनाउँदा कसैले पत्याउँदैनन् । कथा भनेको जस्तो मान्छन् ।
रुकुम धेरै धौ हुने ठाउँ हो । त्यतिबेला नदी नाला धेरै थिए । पुलहरु नहुँदा कति हो कति हिँडनु पर्ने । हामी ९ दिदीबहिनी र तीन दाजुभाइ थियौं । परिवारको जेठो सन्तान म आफै भएकाले घरका काम मेलापात, घाँसदाउरा र पर्म तिर्ने काम मैले नै गर्नुपर्थ्यो । हाम्रो पालामा यति धेरै सुख सयल थिएन । नुन चामल ल्याउनु परे भोट (हालको जुम्ला) या नेपालगंज जानुपर्थ्यो । घरदेखि जङलसम्मको काम मेरो जिम्मामा थियो । पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा थिएन । काम जसले बढि गर्न सक्यो त्यसैले सम्मान पाउँथ्यो ।
मलाई एउटा घटना अहिले पनि याद आइरहन्छ । सायद म त्यतिखेर ९–१० वर्षकी थिएँ । खुट्टामा चप्पल थिएन । न्यानो कपडा लगाउने त कुरै भएन । वर्षातको समय भएकाले सिमसिम पानी परिरहेको थियो । मेरो बुवासँग नुन ल्याउन भोट जानुपर्ने भयो । त्यहाँ बेच्न घिउ लान्थ्यौं अनि त्यो घिउ बेचेर नुन किन्थ्यौं । भोट पुग्न १० दिन, त्यस्तै आउन १२ दिन लाग्थ्यो । लेकको बाटो हिँड्नुपर्थ्यो। हामी साउन या भदौमा २०/२५ जनाको समूहमा भोट गयौं । बाटोमा खान सातु (खाजा भुटेर दलेको पिठो) र कसार बोक्थ्यौं । घरेली, निगालपानी, परिखोला र छिनिमन्का हुँदै भोट पुग्थ्यौँ । वर्षातको समय लेकको बाटो हिँड्नु पर्ने त्यो पनि रातारात । दियालो बालेर हिँड्थ्यौं । आउँदा जाँदा हाम्रो बास ओढार, गुफा र पौवामा हुन्थ्यो । बाटोमा झारपातको तरकारी बनाएर खानुपर्थ्यो । भोट जाँदा १० रुपैयाँ लिएको थिएँ । १० रुपैयाँले बाह्र लम्बर नुन किनेको याद छ । एकदिन हिँड्दाहिँड्दै हाम्रो बास एउटा गुफामा भयो । दुई समूहमा बास बसेका थियौं । बास बसेको गुफाभित्र बाघ पो रहेछ । तरकारी पकाउने आगो फुक्दै गर्दा धुवाँले निसास्सिएर हामीलाई उछिन्दै बाहिर आयो । धन्न केही भएन ।
मुखियाका घरमा पसल थियो । त्यहाँ सलाई पाइन्थ्यो । जाँदा दुईवटा घिउका बाकस हन्थे । घिउका बाकस मुखियालाई दिएर हामीले अरु समान ल्याउनुपर्ने ।
अर्कोेपटक १३ बर्षको उमेरमा नुन र चामल ल्याउन नेपालगन्ज गएँ । नेपालगन्ज जाँदा १४ दिन र आउँदा १८ दिन लागेको थियो । नदीको किनार किनारै कालिमाटी हुँदै जान्थ्यौ । त्यो पटक ३५ जना थियौं । नेपालगन्जको यात्रामा पनि पाटी, पौवा र गुफामा रात बिताउँदै गइयो । एक रुपैयाँमा नम्वरी नुन पाइन्थ्यो । कपडा पनि त्यतिकै सस्तोमा पाइन्थे । डबललेटका कपडा लगाउँथ्यौ । नेपालगञ्ज जाँदा पहिलोचोटी त्यहीँ ट्रयाक्टर देखेको थिएँ । डर पनि लाग्यो ।
बाटोमा सामान ल्याएर घर आउँदा चोरहरुले दुःख दिन्थे । हामी सल्यानको भोटेचौरको खोलामा बास बसेका थियौं । राति १२ बजेतिर हो जस्तो लाग्छ मान्छेहरु कराएर डाँडावारी र डाँडापारीबाट प्रश्न गर्दै थिए । पारिकोलाई लौरु हुन कि बगेर्ना भनेर सोध्दा पारिकाले लौरु भनेर जवाफ दियो । लौरु कि बगेर्ना भन्ने शब्द चोरहरुले प्रयोग गर्ने गर्थे । लौरु भनेको हाटबाट टन्न सामान बोकेर घर आउँदै गरेका र बगेर्ना भनेका पैसा लिएर हाट जाँदै गरेका भन्ने बुझिन्थ्यो ।
उनीहरुले विशेष गरि लौरु भन्दा बगेर्नालाई बढि लुटने गर्थे । तर त्यो दिन हामीलाई नै लुटे । हामी टाढा टाढा सुतेका थियौं । हामीसँग भएका १० जनाका डोका र सबै समान लगे । मेरो बुवा चोरसँग झगडा गर्नुभयो तर केही लागेन । अरुको समान भने बच्यो । हामी धेरै भएपनि रातको समय चोरको प्रतिकार गर्न कसैको हिम्मत थिएन । रुँदै रुँदै घरमा आयौं । आज जस्तै लाग्छ नदीको किनारमा सुतेको बेला हामीले ओडेको सिरक र डोकाको सामान पनि लगिदिन्थे । जति रोए पनि कराए पनि कसले सुन्ने हाम्रा कुरा ?
प्रस्तुति: आदर्श के.सी/उज्यालो